Momban'ny fikambanana | Malina
Ny tambazotra mpanao gazety MALINA
MALINA dia tambazotrana mpanao gazety mpanatsikafina malagasy izay niforona ny taona 2018. Tohananan’ny fikambanana Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM) io tambazotra io. Tanjona lehibe an’io tambazotra io ny hamokatra lahatsoratra sy fanadihadihana lalina sy tsara fanatontosana izay hamoaka ny marina ao ambadikin’ny kolikoly avo lenta eto Madagasikara.
Malina dia manana Komity misahana ny fanoratana. izay misy an’ireo mpanao gazety rehetra anatin’ny tambazotra, ary ny olona avy ao amin’ny TI-IM amin’ny fandrindrana sy fanampina ny tambazotra. Ramatoa Ketakandriana RAFITOSON, Tale Mpanatanteraka, no mpandrindra io komity io
Ny Komity siantifika, izay misy ny manampahaizana manokana avy amin’ny fiarahamonim-pirenena sy ny aino aman-jery, no mitari-dalana ny komity amin’ny lohahevitra tokony hanaovana fanadihadihana ary koa mandinika ny fahatomombanana sy ny fahamafisan’ny voka-panadihadihana avokan’ny tambazotra
Mpanoa gazety ve ianao? Te hiditra mpikambana ao amin'ny tambazotra MALINA ?
Ny mpanao gazety matianina izay manampikasana hiditra amin’ny tambazotra malina dia afaka mifandray aminay amin’ny alalan’ny adiresy mailaka contact@malina.mg
Ny mpanao gazety mpikambana ao tambazotra MALINA (Juin 2019)
HOBINIAINA Lomelle Yanne Honorée
RAHARIJAONA Fabiola Farah
RANDRIANASOLO Andry Rialentsalama
RASOLOARISON Harimbola Monica
RAVELONAHINA Hilda Tsinjo